I-5 ye-android kunye ne-ios imidlalo efana neligi yamabali abalandeli beemfazwe ezinkulu
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Imidlalo ye-5 ye-Android kunye ne-iOS efana neLigi yamaNqaku abalandeli beemfazwe ezinkulu
I-League of Legends ngumdlalo owaziwayo weqhinga lomlo we-PVP kunye neapos ekwabizwa ngokuba sisihloko somdlalo we-cyber. Okwangoku, ii-apos azifumaneki kwizixhobo zefowuni ngesizathu esithile, kodwa ekubeni sisihloko esinempembelelo, zininzi imidlalo ye-Android kunye ne-iOS eboleka kwifomula yayo kunye nesitayile semibala emibalabala. Senze imidlalo emihlanu eya kukuzisela amava athelekisekayo, agqityiweyo kunye neziboniso ezityebileyo kunye neemfazwe ezinkulu zabadlali abaninzi.
I-LoM ibonelela ngexesha elikhawulezileyo leMfazwe ye-PVP ngokuchasene ne-AI kunye nabanye abadlali. Kuya kufuneka utshabalalise iinqaba zotshaba kunye nendawo yazo engcwele ukuze uzuze uloyiso kwimidlalo eqhubeka malunga nemizuzu emi-5 ukuya kweli-10. Unokwenza amaqela acwangcisiweyo, uzingele isigebenga esikhulu sehlathi, kunye nolawulo lweeNtshatsheli ukufumana amandla ngokuchasene notshaba.
Ihlabathi lase-Etryna lilawulwa ngumlingo onamandla kunye namagorha anamandla, kwaye kukuwe ukudibanisa imikhosi yamaqela alwayo ngokuchasene notshaba oloyikisayo. Umdlalo udibanisa umlo okhawulezayo kunye nesicwangciso esinamandla, sikuvumela ukuba uyalele umkhosi wamagorha ukusindisa umhlaba. Kukho amanqanaba angama-90 okuvela komlinganiswa, ngaphezulu kwe-120 yemibuzo emininzi, kunye namaqhawe angama-40 + okuqokelela, ukuxhobisa kunye nokuyalela. Ungafikelela kwi-PvP yeHlabathi ukuze udibanise iimfazwe ezingaqhelekanga okanye ezinokhuphiswano ezi-3-on-3 zokulwa nabadlali abavela kwingingqi yakho.
Khuphela kwi I-Android okanye ios
Ngabantu abasecaleni lokufumana imfihlo yobomi obungunaphakade, iingelosi kunye needemon ezimbi zenza isivumelwano sokumemezela i-apocalypse ukuba ikwazi ukuzambathisa kwihlabathi lokwenyani, ilwe nabantu boyise kwaye igcine isangqa sobomi sihambelane. I-SoulCraft ikuvumela ukuba udlale njengengelosi kwaye uzonwabise kwiindawo ezininzi zehack'n & apos; slash kunye nejele yokukhasa. Iqukethe imifanekiso emangalisayo, enemibala, ukulwa kwiindawo zangempela ezifana neVenice, iRoma, iHamburg, iNew York ne-Egypt; Iindlela ezintlanu zomdlalo ezahlukeneyo kubandakanya ixesha lokubaleka, ibala lemidlalo, igehena, ikristale yokuzikhusela kunye nemilo yokulwa; kunye neentshaba ezininzi ezahlukeneyo kunye nezixhobo, amakrele, izinto, imilo, izixhobo, izixhobo kunye nokuphanga.
Amaqhawe emidlalo ngumdlalo weqhinga lokwenyani lexesha lokwenyani kunye nemidlalo ekhawulezayo nenamandla, ubuchule oba-4 obukhethekileyo kumlinganiswa ngamnye kunye nokukwazi ukulawula amaqhawe ama-3 kwimidlalo efanayo ye-MOBA. Kuya kufuneka ugcine inkqubela phambili yokulinganisa kweqhawe ngalinye kwimidlalo kwaye uphuhlise uninzi lwalo njengoko ufuna. Kukho iimephu ezingamashumi amathathu ezibonelela ngemingeni eyahlukileyo yabo bonke abadlali. Unokusebenzisa amandla okunyusa ukuphucula abalinganiswa bakho kwaye ubenze ngokukhawuleza, bomelele okanye bomelele.
Yilwa kunye namaqhawe kunye neengelosi kwidabi lokulwa noMkhosi kaMtyholi. Funda umlingo, ulwe namanye amajoni akhaliphileyo, kwaye uhlasele ikomkhulu leNkosana enguMtyholi eyoyikekayo. Kuya kufuneka uqeqeshe ingelosi yakho oyithandayo kwaye uyiyeke ikukhokele endleleni, ulwe nezilo ezingendawo, uxhobise amaqhawe akho ngezixhobo ezifanelekileyo, kwaye uqinisekise ubukhosi bakho kwiimfazwe zalapha ekhaya neziseva.
ifilimu yesilwanyana vs iglasi enomsindo
Isamsung kunye neapos; yakutshanje ye-Android 6.0 Marshmallow yokuhlaziya ishedyuli yokuvuza: Qaphela i-5 ngoDisemba, i-S6 ngoJanuwari, i-S4 ayisiyiyo
I-Samsung Galaxy S6 kunye ne-S6 Edge yokubandezeleka kwimiba yescreen?
Imephu yokugubungela inethiwekhi ye-5G: zeziphi izixeko ezigutyungelweyo?
UGoogle uvavanya izinto ezimbini kubasebenzisi beYouTube
I-Samsung Galaxy Qaphela i-7 kunye ne-Samsung Galaxy S7 Edge